Xiaomi Mi6ကိုဝယ်ပါ၊ သို့မဟုတ် OnePlus5ကိုစောင့်ပါ။ | Androidsis
Xiaomi Mi6ကိုဝယ်ပါ၊ သို့မဟုတ် OnePlus5ကိုစောင့်ပါ။
Elvis bucatariu | | OnePlus, Xiaomi က
Xiaomi Mi6အသစ်
Xiaomi Mi6ကိုတရားဝင်မြင်တွေ့ရပြီ ၎င်း၏ specs အတော်လေးအထင်ကြီးဖြစ်ကြသည်12X optical zoom, 2GB RAM နှင့် Snapdragon6ပရိုဆက်ဆာတို့ပါ ၀ င်သည့် 835 megapixel ကင်မရာနှစ်လုံးပါဝင်သည်။
သို့သော်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းများအချို့ရှိခြင်း, များစွာသောဖြစ်ကြသည် Xiaomi Mi6ကိုအခြားသော Galaxy S8 နှင့် iPhone7Plus ကဲ့သို့သောအခြားမိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း, အဘယ်သူ၏စျေးနှုန်းများလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအကွာအဝေးပိုင်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ငါအောက်တွင်ဆွေးနွေးမည့်အခြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်, Xiaomi Mi6နှင့်ပြိုင်ဘက်တစ်ခုတည်းသောပြိုင်ဘက်သည် OnePlus ၏အဓိကပြိုင်ဘက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ယခုလူသိများသည်။ OnePlus 5.
1 ဘာကြောင့် Xiaomi Mi6ကိုပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် OnePlus5ကသာယှဉ်ပြိုင်မှာလဲ။
2 Xiaomi Mi6နှင့် OnePlus5အကြားဖြစ်နိုင်ခြေခြားနားချက်များ
3 OnePlus5လွှတ်ပေးရက်
ဘာကြောင့် Xiaomi Mi6ကိုပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် OnePlus5ကသာယှဉ်ပြိုင်မှာလဲ။
OnePlus5အယူအဆ
Xiaomi Mi6တွင်အခြားစျေးကြီးသောမိုဘိုင်းဖုန်းများထက်ပင်ထူးခြားသောလက္ခဏာများရှိသော်လည်းအမှန်တရားမှာမိုဘိုင်းဖုန်းသည်ပိုင်ဆိုင်သည် ကွဲပြားခြားနားသောစျေးနှုန်းအကွာအဝေး။ ယခုအချိန်တွင် Xiaomi Mi6ကိုကြိုတင်ရောင်းချထားပြီးဖြစ်ပြီး internal memory 450GB ဖြင့်ယူရို ၄၅၀ ဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ 64GB model သည်စပိန်နိုင်ငံတွင်ယူရို ၅၀၀ အထိစျေးနှုန်းသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အရာအားလုံးရှိနေသော်လည်းဤအကြောင်းကိုနေဆဲဖြစ်သည် ယူရို ၂၀၀ သို့မဟုတ် ၃၀၀ ယူရို Galaxy S200 သို့မဟုတ် iPhone 300 နှင့် 8 Plus တို့၏စျေးနှုန်းထက်နည်းသည်.
Xiaomi Mi6ကဲ့သို့ပင်လာမည့် OnePlus5တွင် Snapdragon 835 ပရိုဆက်ဆာနှင့် 6GB (သို့) ပင်အပါအ ၀ င်စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များလည်းပါ ၀ င်မည်။ RAM 8GB။ သို့သော်အကောင်းဆုံးမှာ၊ OnePlus5သည် Mi6ကဲ့သို့စျေးနှုန်းချိုသာသောအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်, ဤမျှလောက်များစွာသောခက်ခဲတစ် ဦး သို့မဟုတ်အခြားရွေးချယ်ဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။
Xiaomi Mi6နှင့် OnePlus5အကြားဖြစ်နိုင်ခြေခြားနားချက်များ
Xiaomi က Mi6မှာရှိနေတုန်း ၅.၁၅ လက်မ IPS LCD မျက်နှာပြင် (Full HD resolution)၊ OnePlus5သည် AMOLED မျက်နှာပြင်တစ်ခုယူဆောင်လာပါလိမ့်မည် ၅.၅ လက်မအရွယ် Quad HD resolution နှင့်အတူ။
Hardware ပိုင်းအရ terminal နှစ်ခုသည်ပိုမိုဆင်တူသည်။ OnePlus5တွင် Snapdragon 835 ပရိုဆက်ဆာနှင့် RAM 6GB ပါရှိမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ သို့သော်တရုတ်ကုမ္ပဏီသည် RAM 8GB အထိ၎င်း၏အထင်ကရနေရာတွင်ပါဝင်ခြင်းကိုအံ့အားသင့်နိုင်သည်။ ယခင်မော်ဒယ်နှစ်ခုဖြစ်သော OnePlus3နှင့် 3T တွင် 6GB RAM ရှိပြီးဖြစ်သည်။
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားနှင့် RAM ပမာဏအပြင် Xiaomi Mi6နှင့် OnePlus5တို့အကြားကွဲပြားခြားနားမှုများကိုတွေ့နိုင်သည့်အခြားကဏ္sectionsများမှာ ကင်မရာများနှင့်ဘက်ထရီများ.
Xiaomi က Mi6မှာဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုပါ 12-megapixel dual ကင်မရာ နောက်ဖက်တွင် 2X optical zoom ကိုထောက်ပံ့ပေးထားသည်။ OnePlus5တွင် 23 megapixel (dual?) ကင်မရာရှိနိုင်သည် ထို့အပြင် lossless optical zoom နည်းပညာနှင့်အတူ။
ဘက်ထရီနှင့် ပတ်သက်၍ မူ Xiaomi Mi5ရှိ 3000mAh ဘက်ထရီနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက OnePlus 3350 သည် 6mAh ဘက်ထရီကို Dash Charge အစာရှောင်ခြင်းဖြင့်လျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒါပေမဲ့ အကြီးမားဆုံးခြားနားချက် Xiaomi Mi6မှာ splash ခုခံမှုရှိတာကြောင့် OnePlus5သည် IP68 ခုခံနိုင်စွမ်းကိုအသိအမှတ်ပြုပေးနိုင်ပြီးမိနစ် ၃၀ အတွင်းနက်နက် ၁.၅ မီတာတွင်ရေထဲသို့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနစ်မြုပ်စေနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကဏ္sectionတွင်ပါဝင်သည်။
OnePlus5လွှတ်ပေးရက်
OnePlus5ကိုနွေ ဦး ရာသီ၊ ဇွန်လသို့မဟုတ်ဇူလိုင်လတွင်စတင်မိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ရာမည်သည့် ဦး ဆောင်မှုကို ဦး ဆောင်မည်ကိုသိရှိရန်အနည်းငယ်သာကျန်တော့သည်။
အခုအချိန်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင် Xiaomi Mi6ဟာစစ်မှန်တဲ့“ အထင်ကရလူသတ်သမား” ဖြစ်ပြီးအခြားအဆင့်မြင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများထက်စျေးနှုန်းချိုသာပြီး ခြွင်းချက်သို့မဟုတ်ပင်သာလွန်စွမ်းဆောင်ရည်.
ပိုကောင်းတဲ့ resolution ပိုမြင့်တဲ့ screen နဲ့ IP68 အသိအမှတ်ပြုစာသို့မဟုတ် RAM ထက်ပိုတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ကိရိယာရှိရင် OnePlus5ကိုပိုကောင်းအောင်စောင့်ပါ။
Xiaomi Mi6အသစ်ကိုသင်ဘယ်လိုထင်သလဲ OnePlus5ဟာပိုကောင်းမယ်၊ ပိုကောင်းလိမ့်မယ်ထင်သလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » OnePlus » Xiaomi Mi6ကိုဝယ်ပါ၊ သို့မဟုတ် OnePlus5ကိုစောင့်ပါ။
Samsung Galaxy S8 နှင့် S8 Plus အနီရောင်မျက်နှာပြင်ပြproblemနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
Google ကကြော်ငြာ blocker ကို Chrome version အားလုံးတွင်အကောင်အထည်ဖော်မည်